Pesticide pụrụ iche nwekwara Manufacturers - China Pesticide pụrụ iche nwekwara suppliers & Factory
oru ugbo na gburugburu ebe obibi nke diatomaceous ogwu maka ogwu na umu ogwu dika ihe nzacha
Nchịkọta nkọwa ngwa ngwa Ebe nke Si Malite: JIlin, China Brand Name: Dadi Product aha: diatomite ntụ ọkwa: ọkwa ọkwa Ọdịdị: ntụ ntụ ọkọnọ ikike
oru ugbo na oru oma diatomite pesticide pụrụ iche ihe ntụ ntụ
Isi Nkọwa Ndenye CAS Mba.: 61790-53-2 / 68855-54-9 Aha ndị ọzọ: Celite MF: SiO2.nH2O EINECS Mba.: 212-293-4 Ebe nke Si Malite: Jilin, China State: GRANULAR, Powder Purity: SiO2> 88% Ngwa ...
F30 TL301 diatomite ugbo kemikal oru oma Pesticide pụrụ iche ugbo diatomaceous mgbakwunye
oru oma diatomite Pesticide pụrụ iche nwekwara pink akụrụngwa ọgwụ ntụ ntụ maka ụmụ ahụhụ
ugbo chemical diatomite oru oma pesticide nwekwara fatịlaịza
Nchịkọta nkọwa ngwa ngwa Ebe Mmalite: jilin, China Aha aha: Dadi Nọmba Nlereanya: TL301 / F30 / TL601 Nhazi ọkwa1: Nhazi Ọgwụ3: Osisi Utu Na-achịkwa Ọha: 14/40/80/150/325 ntupu PH: 5-11 ...
ugbo diatomaceous oru oma pesticide nwekwara
A na-enwetakarị ụwa dị na mmiri site na ịmịcha, na-ebugharị na nhazi maka inweta ngwaahịa ndị yiri ya, a na-achọkarị ọdịnaya ya ka ọ dịkarịa ala 75% ma ọ bụ karịa na ihe ndị dị n'okpuru 4%. Imirikiti ụwa diatomaceous dị nha arọ, obere ike, dị mfe ịkụpịa, dara ogbenye na nkwado, obere njupụta ntụ ntụ (0.08～0.25g / cm3), nwere ike ise n'elu mmiri, pH uru bụ 6～8, ọ dị mma maka nhazi wettable ntụ ntụ. Agba nke diatomite metụtara ịdị ọcha ya.
diatomite oru oma pesticide pụrụ iche nwekwara ọcha ntụ ntụ
Onye na-ebu ụgbọ mmiri ma ọ bụ ihe nchekwa bụ ihe na-adịghị edozi na nhazi nhazi ahụhụ. Isi ọrụ ya bụ iji hụ na ọdịnaya nke pesticide na-arụsi ọrụ ike na ihe ndị e mepụtara ma kesaa ihe ndị na-arụ ọrụ nke ọgwụ mbụ ahụ na ndị na-agbakwunye agbakwunye na ihe ndị ọzọ. A na-emepụta ngwakọta edo iji chekwaa dispersibility na fluidity nke ngwaahịa ahụ; n'otu oge ahụ, arụmọrụ nke ngwaahịa a ka mma, ọ ga-eji ya mgbe etinye ya n'ime mmiri n'enweghị nsogbu na adaba.
arụ ọrụ mmiri na-arụ ọrụ nke ọma pesticide pụrụ iche pesticide ntụ ntụ
Diatomaceous ụwa bụ oke nkume sedimentary na-ekesa ebe niile, nke dị mfe igweri ntụ ntụ ma nwee mmiri absorption siri ike. Ọ bụ ụlọ na-egbu egbu ma ọ bụ ogige zuru ebe niile. Diatomaceous ụwa nwere ike igbu ụmụ ahụhụ. Isi usoro ya bụ igbu ụmụ ahụhụ site na mmeghachi omume anụ ahụ. Ihe kpatara ya bụ na e guzobere ụwa diatomaceous site na ntinye nke shells nke ejiri diatoms. Microorganism a nwere shei nkọ dị ka agịga.
diatomite F30 TL301 Pesticide pụrụ iche mgbakwunye ọcha / pink ntụ ntụ